के कोरोना संक्रमित भएकालाई भ्याक्सिनको एक डोज नै पर्याप्त हुन्छ त ? के भन्छ अध्ययन ?
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर विभिन्न अध्ययनका निष्कर्षहरु बाहिर आइरहेका छन् । हालसम्म यस्तो मानिएको थियो कि कोरोना विरुद्ध एन्टीबडी बनाउनका लागि भ्याक्सिनको दुई डोज आवश्यक हुन्छ ।
तर, अब नयाँ एक अध्ययनका अनुसार जो मानिस संक्रमित भएका छन् उनीहरुलाई एउटा भ्याक्सिनको डोज नै काफी रहेको छ । ती व्यक्तिहरुलाई एक डोज नै कोरोना विरुद्ध पर्याप्त प्राटेक्शन दिनमा सफल सावित भएको अध्ययनले जनाएको छ ।
यो अध्ययन लण्डनको इम्पेरियल कलेज, क्वीन मेरी विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय कलेजका वैज्ञानिकहरुले मिलेर गरेका हुन् ।
यो अध्ययन साइन्स जर्नलमा समेत छापिएको छ । अध्ययनमा दाबी गर्दै भनिएको छ कि कोरोना संक्रमति भएका व्यक्तिलाई एक डोज नै पर्याप्त एन्टीबडी बन्यो । वैज्ञानिकरुले दक्षिण अफ्रिकाको भेरियन्टको अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताले फाइजरको भ्याक्सिनको प्रयोग गरेका थिए ।